I-China Plastiki yefilimu yokuhlobisa umshini wokukhulisa umshini kanye nabakhiqizi | Zhuoya
Siphinda sibize lo mshini wefasitela wokuxubha weplastiki njengomsizi we-brashi we-fiber extruder, umshini wokuxubha ibrashi, umugqa wokukhiqizwa kwe-brashi njalonjalo. Umugqa wefreyimu yokwenza umshini ungakhiqiza i-PET, i-PP, i-monofilament ye-PE yokwenza izinhlobo ezihlukile zokuxubha zepulasitiki njengebhrashi yokuhlanza i-floor, izingubo zokuhlanza izingubo, ibhulashi lepolishi, ibhulashi le-toliet njll. Singasebenzisa izinto ezingavuthiwe ezisetshenzisiwe ukwenza umkhiqizo wekhwalithi ephezulu ngokusekelwa kobuchwepheshe bethu, ngakho-ke umugqa wethu womshini wamukelwa kabanzi ngamakhasimende emhlabeni wonke.
Ngokuya ngezidingo zamakhasimende ahlukile, sinikezela ngomugqa wekhompiyutha wokugcwalisa ifilimu weplastiki njengolwazi olungezansi.
Imodeli ZYLS-75 I-ZYLS-80 ZYLS-90
Isikulufa L / D 30: 1 30: 1 30: 1
Imodeli ye-Gearbox 200 200 200
Imoto enkulu 18.5kw 22 / 30kw 30 / 37kw
Amandla (kgs / h) 80-100kgs 100-120kgs I-120-140kgs
I-Filament Dia. 0.18-2.5mm 0.18-2.5mm 0.18-2.5mm
1. Ukulungiswa komugqa okwenziwe ngokwezifiso ngokususelwa kwizidingo zamakhasimende.
2. Umklamo womshini ongabizi kakhulu wamakhasimende endawo ahlukile.
3. Ukuxhaswa kobuchwepheshe obuthuthukisiwe bokuqinisekiswa kwekhwalithi ephezulu ye-brashi.
4. Izinto zokwenziwa kabusha ezisetshenzisiwe zisetshenziselwa ukunciphisa izindleko zokukhiqiza.
5. Insiza yokumisa eyodwa ukwenza uqiniseke.
6. Inkonzo ephelele ngemuva kokuthengisa izoyixazulula noma imiphi imibuzo ngesikhathi
Ibhulashi lokuhlanza phansi, ibhulashi le-tableware, ibhulashi lokuhlanza izithuthi, ibhulashi yokuhlanza imifino, ibrashi yokuhlanza izicathulo, ibhulashi lamabhodlela obisi, ibhulashi yokuhlanza i-chimney, ibhulashi lendlu yangasese, ibhulashi lokuhlanza iqhwa njll.
>> Plastic umshini wokugcwalisa umshini wokugcwalisa umshini
Esedlule: Umshini wokugcwalisa indophi weplastiki
Olandelayo: Umshini wokufakelwa womshini weplasitiki opulasitiki